ယူထားတာက 5star ဈေး တည်းခိုခန်းလောက်တောင် အဆင့်မရှိတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု့မျိုးနဲ့ ပုဂံကဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ ကိုယ်တွေ့ – MyanmarEating
ယူထားတာက 5star ဈေး တည်းခိုခန်းလောက်တောင် အဆင့်မရှိတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု့မျိုးနဲ့ ပုဂံကဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ ကိုယ်တွေ့
ကျတော်တို့မိသားစု 23,10,2018. မန်းလေးကနေ ပုဂံညောင်ဦးအလည်ခရီးထွက်လာခဲ့တယ် ညနေ၄နာရီလောက်ပုဂံရောက်တယ် ဟိုတယ်အခန်းလိုက်ရှာရင်း အတော်များများဟိုတယ်တွေကအခန်းပြည့်နေပြီး ရှာရင်းဖွေရင်းနဲ့ ညနေ၆နာရီလောက်ရောက်တော့ အခန်းမရသေးဘူး
သားအဖတွေကားရပ်ပြီး ဟိုတယ်တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရှာပြီး ဟိုတယ်တစ်ခုချင်းစီဖုန်းဆက်မေးတယ် နောက်ဆုံးတော့ xxxx Hotel မှာမိသားစုခန်းတစ်ခန်းပဲကျန်တော့တယ် ဈေးကတော့ ၂၉၀၀၀၀ စိတ်ထဲမှာများပေမဲ့ မရှိတဲ့အဆုံး အိုကေယူမယ် ခုလာခဲ့ပြောပြီး မိသားစုပျော်ပြီးပြေးလာကြတယ်
ယူထားတာက 5star ဈေး တည်းခိုခန်းလောက်တောင်အဆင့်မရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှု့မျိုးနဲ့ ပုဂံကဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ ကိုယ်တွေ့ 2
ဟိုတယ်ရောက်တော့ ကောင်တာမှာပဲပိုက်ဆံ 290000ရှင်းပြီး နောက်ထပ် နိုင်ငံတော်အခွန်14500 ထပ်ပေးလိုက်ရတယ် စုစုပေါင်း 304500 ကျမယ်တဲ့ ငွေရှင်းပြီးကောင်တာကနေအခန်းသော့ပေးပြီးရပ်စောင့်နေရတာ အတော်ကြာမှ အခန်းကသည်ဘက်ကနေသွားလိုက် အခန်းနံပါတ် ၁၁၆တဲ့ လိုက်လဲမပို့ဘူး အိတ်တောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သယ်သွားရတာ အခန်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူပြောတုန်းကမိသားစုခန်းကုတင်ငါးလုံးပါတယ်
ခုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကုတင်၂လုံးနဲ့ အပိုမွေ့ယာ၂လုံးထိုးပေးထားတယ် စုစုပေါင်း၎ယောက်အိပ် အခန်းကျဉ်းလေးဖြစ်နေတာ ချက်ချင်းဆိုသလို ၂၉၀၀၀၀ ကျပ်ပေးပြီး ရထားတဲ့အခန်းနဲ့ ရိုက်ခံလိုက်ရပြီဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက်ပြီ
ယူထားတာက 5star ဈေး တည်းခိုခန်းလောက်တောင်အဆင့်မရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှု့မျိုးနဲ့ ပုဂံကဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ ကိုယ်တွေ့ 3
သည့်ထက်ပိုဆိုးတာက ရေမိုးချိုးပြီး အပြင်သွားခါနီး လိုက်ကာချထားတဲ့ပြူတင်ပေါက်၎ပေါက်ကိုစစ်ကြည့်တော့ တစ်ပေါက်ကဂျက်ထိုးမထားဘူး တွန်းဖွင့်လိုက်တော့လဲ သံပန်းကာမထားဘူး မစစ်များမစစ်လိုက်ရင် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲတောင်မတွေးဝံ့ဘူး အာ့ကိုကောင်တာမှာတစ်ခါတည်းဝင်ပြောရင် ကျွန်တော်အပြင်ထွက်မို့ ကျတော့အခန်းမည်သည့်အကြောင်းနဲ့မှ မဝင်ပါနဲ့လို့မှာခဲ့ပြီး ခုဏကအခန်းဘောက်ချာပေးဦးဆိုတော့ ဘောက်ချာပေးလာတယ်
ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ အခွန်နံဆိပ်ခေါင်းကပ်မထားဘူး အာ့နဲ့ဘယ်မှာတုန်း ကျတော့ဆီကကောက်ထားတဲ့အခွန် 14500 ဆိုတဲ့တံဆိပ်ခေါင်း အာ့ကျမှမန်နေဂျာကိုဖုန်းဆက်ပြီမှ ကျွန်တော့ကို ဘယ်နှစ်ခုကဒ်ရမှာလဲ ဘယ်မှာကဒ်ရမှာလဲဆိုပြီး ,မင်းတို့ယူထားတဲ့ 14500 မပြည့်မချင်းကပ်ပေးဆိုမှကပ်ပေးခဲ့တာ တစ်ခါတည်းနဲ့ကြောက်ပါပြီဗျာ
ရေချိုးခန်း ခေါင်းလျှော်ရည်လဲ မပေး
ကျွန်တော့ဘဝမှာ ခင်ဗျားတို့ဟိုတယ်နဲ့မှ တစ်ည၃သိန်တန်အခန်း အိပ်ဖူးတော့တယ်
ယူထားတာက 5star ဈေး တည်းခိုခန်းလောက်တောင်အဆင့်မရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှု့မျိုးနဲ့ ပုဂံကဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ ကိုယ်တွေ့ 4
ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် သူ့လူတွေသည်လိုစီးပွားရှာတော်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု့အားနည်းချက်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်သိထားရဲ့လားလို့ နောက်လူတွေလဲကျွန်တော့လိုမခံရအောင်လို့ ရေသားတင်ပြလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်
ယူထားတာက 5star ဈေး တည်းခိုခန်းလောက်တောင်အဆင့်မရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှု့မျိုးနဲ့ ပုဂံကဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ ကိုယ်တွေ့ 5
ကတြျောတို့မိသားစု 23,10,2018. မနျးလေးကနေ ပုဂံညောငျဦးအလညျခရီးထှကျလာခဲ့တယျ ညနေ၎နာရီလောကျပုဂံရောကျတယျ ဟိုတယျအခနျးလိုကျရှာရငျး အတျောမြားမြားဟိုတယျတှကေအခနျးပွညျ့နပွေီး ရှာရငျးဖှရေငျးနဲ့ ညနေ၆နာရီလောကျရောကျတော့ အခနျးမရသေးဘူး သားအဖတှကေားရပျပွီး ဟိုတယျတှရေဲ့ဖုနျးနံပါတျကိုရှာပွီး ဟိုတယျတဈခုခငျြးစီဖုနျးဆကျမေးတယျ နောကျဆုံးတော့ xxxx Hotel မှာမိသားစုခနျးတဈခနျးပဲကနျြတော့တယျ ဈေးကတော့ ၂၉၀၀၀၀ စိတျထဲမှာမြားပမေဲ့ မရှိတဲ့အဆုံး အိုကယေူမယျ ခုလာခဲ့ပွောပွီး မိသားစုပြျောပွီးပွေးလာကွတယျ
ယူထားတာက 5star ဈေး တည်းခိုခန်းလောက်တောင်အဆင့်မရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှု့မျိုးနဲ့ ပုဂံကဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ ကိုယ်တွေ့ 6
ဟိုတယျရောကျတော့ ကောငျတာမှာပဲပိုကျဆံ 290000ရှငျးပွီး နောကျထပျ နိုငျငံတျောအခှနျ14500 ထပျပေးလိုကျရတယျ စုစုပေါငျး 304500 ကမြယျတဲ့ ငှရှေငျးပွီးကောငျတာကနအေခနျးသော့ပေးပွီးရပျစောငျ့နရေတာ အတျောကွာမှ အခနျးကသညျဘကျကနသှေားလိုကျ အခနျးနံပါတျ ၁၁၆တဲ့ လိုကျလဲမပို့ဘူး အိတျတောငျကိုယျ့ဟာကိုယျသယျသှားရတာ အခနျးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတော့ သူပွောတုနျးကမိသားစုခနျးကုတငျငါးလုံးပါတယျ ခုဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတော့ ကုတငျ၂လုံးနဲ့ အပိုမှယေ့ာ၂လုံးထိုးပေးထားတယျ စုစုပေါငျး၎ယောကျအိပျ အခနျးကဉျြးလေးဖွဈနတော ခကျြခငျြးဆိုသလို ၂၉၀၀၀၀ ကပျြပေးပွီး ရထားတဲ့အခနျးနဲ့ ရိုကျခံလိုကျရပွီဆိုတာ သဘောပေါကျလိုကျပွီ
ယူထားတာက 5star ဈေး တည်းခိုခန်းလောက်တောင်အဆင့်မရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှု့မျိုးနဲ့ ပုဂံကဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ ကိုယ်တွေ့ 7
သညျ့ထကျပိုဆိုးတာက ရမေိုးခြိုးပွီး အပွငျသှားခါနီး လိုကျကာခထြားတဲ့ပွူတငျပေါကျ၎ပေါကျကိုစဈကွညျ့တော့ တဈပေါကျကဂကျြထိုးမထားဘူး တှနျးဖှငျ့လိုကျတော့လဲ သံပနျးကာမထားဘူး မစဈမြားမစဈလိုကျရငျ ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲတောငျမတှေးဝံ့ဘူး အာ့ကိုကောငျတာမှာတဈခါတညျးဝငျပွောရငျ ကြှနျတျောအပွငျထှကျမို့ ကတြော့အခနျးမညျသညျ့အကွောငျးနဲ့မှ မဝငျပါနဲ့လို့မှာခဲ့ပွီး ခုဏကအခနျးဘောကျခြာပေးဦးဆိုတော့ ဘောကျခြာပေးလာတယျ ကြှနျတျောကွညျ့လိုကျတော့ အခှနျနံဆိပျခေါငျးကပျမထားဘူး
အာ့နဲ့ဘယျမှာတုနျး ကတြော့ဆီကကောကျထားတဲ့အခှနျ 14500 ဆိုတဲ့တံဆိပျခေါငျး အာ့ကမြှမနျနဂြောကိုဖုနျးဆကျပွီမှ ကြှနျတော့ကို ဘယျနှဈခုကဒျရမှာလဲ ဘယျမှာကဒျရမှာလဲဆိုပွီး ,မငျးတို့ယူထားတဲ့ 14500 မပွညျ့မခငျြးကပျပေးဆိုမှကပျပေးခဲ့တာ တဈခါတညျးနဲ့ကွောကျပါပွီဗြာ
ရခြေိုးခနျး ခေါငျးလြှျောရညျလဲ မပေး
ကြှနျတော့ဘဝမှာ ခငျဗြားတို့ဟိုတယျနဲ့မှ တဈည၃သိနျတနျအခနျး အိပျဖူးတော့တယျ
ယူထားတာက 5star ဈေး တည်းခိုခန်းလောက်တောင်အဆင့်မရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှု့မျိုးနဲ့ ပုဂံကဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ ကိုယ်တွေ့ 8
ဟိုတယျပိုငျရှငျကိုယျတိုငျ သူ့လူတှသေညျလိုစီးပှားရှာတျောပွီး ဝနျဆောငျမှု့အားနညျးခကျြတှကေိုသူကိုယျတိုငျသိထားရဲ့လားလို့ နောကျလူတှလေဲကြှနျတော့လိုမခံရအောငျလို့ ရသေားတငျပွလိုကျခွငျးသာဖွဈပါတယျ
Originally posted 2018-10-26 10:28:48.